Linux Mint 11 inowanikwa! | Kubva kuLinux
Kunyangwe iyo nyowani vhezheni yeLinux Mint yakavakirwa paUbuntu 11.04, iyi nyowani vhezheni inosvika isina iyo Unity interface. Iyo inoshandisa iyo yekare uye yechinyakare kutaridzika kweGNOME, iyo iri chokwadi kuve rombo kune vazhinji.
Sekureva kwaClement Lefebvre iye, musiki weLinux Mint projekiti: "Chikwata chinodada kuzivisa kuburitswa kweLinux Mint 11 Katya. Linux Mint 11 inouya neyakagadziridzwa software uye inounza kuvandudzwa uye zvinhu zvitsva kuita kuti desktop yako igadzikane kushandisa. "
Linux Mint 11 yakasarudzika:
Kubva paUbuntu 11.04;
Pasina Shell Kubatana;
Imwe-tinya yekumisikidza ye multimedia codec uye mamwe maitiro.
Zvakawanda zvakagadziridzwa kuSoftware Manager chishandiso;
Kugadziridza kwekuita kweiyo Dhairekitori Chombo
Kugadziridzwa kwakasiyana kwakaitwa kuDesktop Kugadziridza chishandiso;
Seti nyowani yemari;
mint-search-addon yeFirefox 4, Chrome uye Opera webhu mabhurawuza;
gThumb ndiye default mufananidzo muoni;
Banshee ndiye anoridza mimhanzi mutambi;
LibreOffice 3.3 hofisi suite;
Mupumburu bhaa yekufukidza;
Yakagadziridzwa Mint-X theme;
Wakawedzera kuraira 'apt download';
Pasina kupokana imwe yeakanyanya kuvandudzwa muLinux Mint 11 ndiyo Software Center, ine yakanakisa kugadzirisazve. Vakazvigadziridza zvakanyanya, asi vakawedzera kujekesa musangano, vachifambisa zvakanyanya kutsvaga zvirongwa, kungave neboka kana zvakananga. Zvakare, mushandisi ratings yezvirongwa, ruzivo maererano nenzvimbo inodiwa yekuisa mapakeji, nezvimwe, zvechokwadi batsira vashandisi vatsva kuita sarudzo yekuisa chirongwa kana kwete.
Imwe nyaya yashanduka mafomati atinogona kurodha pasi iyo ISO yekugovera. Ivo chaizvo vanobheja pane LiveDVD, chimwe chinhu chinokutendera iwe kuti ubatanidze akawanda mapakeji.
Kuti uwane rumwe ruzivo: Linux Mint Blog
Dhawunirodha Linux Mint 11
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Linux Mint 11 inowanikwa!
Ndinokurudzira kuti uedze Linux Mint
john jongwe akadaro
*** ndaireva ubuntu 11.04, ndine hurombo…. Ini ndichaedza linux mint !! uye ini ndichave ndichiziva izvo zvakatumirwa zvinoenderana neiyo distro yeiyi EXCELLENT webhu
Pindura Juan Gallo
ReparoPC Chile akadaro
Ndiri fan weLinux Mint, ini parizvino ndinoshandisa vhezheni 9. Ini ndatora pasi yekupedzisira vhezheni 11 uye hapana nzira yekuisiya zvachose muchiSpanish. Ichi chikamu muchiSpanish uye chikamu muChirungu. Paunenge uchiedza kurodha pasi mafaera akazara muSpanish, inoratidza kukanganisa uye haivatore. Pane chero munhu anoziva kuzviita? Panguva ino ini ndinoenderera mberi neLinus Mint 9, yakazara muchiSpanish.
Pindura ReparoPC Chile
Maitiro ekugadzirisa nyore nyore Kubatana